"Wa n Madaxda DFKMG la xusuusiyo xeerkii badda Soomaaliyeed u degganaa ilaa 1972 (LAW NO. 37), iyo in ilaa 1972 ay xuduudda badda Soomaaliyeed ahayd 200 maly badeed oo u dhiganta 370 kiiloomitir, islamarkaasna laga soo bilaabo 2009 ay xudduuda badda Soomaaliya noqoneyso 350nm (648 km). Arrinta muhiimka ahna ay tahay in cabbirka 200nm uu ahaa TERRITORIAL WATERS ee uusan ahayn EEZ. Sidaas daraadeedna ay caddeeyaan sababta ku kallifasa in ay aqbalaan 12 mayl."
Bashir Shekh Moxamed | bashirmohamud@yahoo.com
Waxaan Ummadda Soomaaliyeed horay ula socodsiiyay laga soo bilaabo sanadkii 1960kii waxaa Soomaaliya shidaal ka baaray shirkado badan oo ay ka mid yihiin : AMOCO, CONOCO, PHILLIPS, CHEVRON, SHELL-(PECTEN), ARCO, AGIP, ENI, SINCLAIR, Total-Fina-ELF (French company). Shirkadahaasina waxay haystaan heshiisyadii ay la galeen xukuumadihii waddanka soo maray ilaa markii calanka la taagay. Waxayna shirkadahaasi heshiis lagula galay shidaal baarista bad iyo berriba.
Waxaan halkan hoose idiinku soo dhajinaya qoraal yar oo muhiim ah oo caddeynaya in si sharciyan ah aaysan qorshaha ROADMAP-ka uusan u hirgali karin.
Industry sources said the other U.S. companies with contracts in Somalia cited "force majeure" (superior power), a legal term asserting that they were forced by the war to abandon their exploration efforts and would return as soon as peace is restored.
Tixraac: Qoraalkii ay January 18, 1993 qortay Jariidadda LosAngeles Times ee cinwaankiisu ahaa "The Oil Factor in Somalia..."
Haddaba su'aasha meesha taalla waxaay tahay Shikadahaas aan kor kusoo sheegay oo aay u horreeyaan (the American oil giants Conoco, Amoco, Chevron and Phillips) oo heshiisyo caalami ah la galay Soomaaliya rajana ka qaba in aay dib ugu soo laabtaan markii aay Dowlad rasmi ah Soomaaliya ka dhalato.
Haddaba, SIDEE BAA HESHIISYADOODU NOQONAYAAN KUWA HESHIISKOODU UU KU JIRO IN AAY XAQUUQ BAARIS U LEEYIHIIN ILLAA 200nm Territorial Water? Ma waxaay yeeli doonaan qorshaha ROADMAP-ka oo xadadaya illaa 12nm.?
Waxaa meeshaas ka billaabmi doona - Conflicts of interest related to the practice of law. Waa is-herdan u dhexeeya shirkadihii heshiiska kula jirey Dawladihii hore iyo qolyaha dabada ka riixaya Roadmap-ka cusub - waaba ayadoo aan la gaarin Soomaalida.
FactBook (CIA), waxaa ku cad: Soomaaliya TERRITORIAL WATER: 200 nm
Shirkadahaas Batroolka sinnaba kuma yeeli doonaan in aay wax sharci aay u haystaan in aay ka tana sulaan. Intaas waxaa dheer in aay iska hor imaanayaan kuwa ROADMAP wata oo aay u horreeyaan Shirkadihii Kaluunka oo badda Soomaaliya ka daldashay kheyraadkii dhex qotomay 21-kii sano oo lasoo dhaafay oo raba in badda Soomaaliya lagu soo xadado 12nm ayagoo meesha ka saaraya xeerka Law no. 37 ee 1972 oo si cad u qeexaya in Soomaaliya ay leedahay DHUL-BADEED (Territorial Waters), dhul-badeedkaas oo cabirkiisu xeebta ka durugsan yahay 200 mayl-badeed.
Sababta ugu weyn oo Shirkadahaas Kallumeysiga iyo kuwa sunta ku daadshay Badda Soomaaliya waxaay tahay in aay ka cararayaan in dacwad lagu soo oogo markii aay Dowlad rasmi ah ka dhalato Soomaaliya.
ROADMAP-ka waxaa kaloo si gaar ah dabada ka riixaya Commonwealth iyo Norway oo raba in aay batroolka Badda Soomaliya ku jira u gacan galiyaan Dowladda Kenya.
Sida aanu wada arkeyno ROADMAP-ku waxuu wataa wajiyo badan oo uu rabo in uu ku hirgalo annagoo wada arkeyna in MADAXDAYADII aay horboodayaan.
Haddii aan usoo gudbo shirka lagu qaban doono Magaalada Garoowe wajigiisa labaad, waxaan Dowladda KMG Soomaaliyeed la socodsiinayaa in Qorshahaan ROADMAP-ka ay Soomaalida oo dhami ay hadda la wada socdaan oo ay ogyihiin in saxiixyo laga arruursanayo.
Waxaan Ummadda Soomaaliyeed la socodsiinayaa in markii ay helaan saxiixyada u dhimman oo ay ka sugayaan Gaoowe iyo Muqdisho in qorshohoodu u dhammaaday oo xataa aan la sugeynin muddada beenta ah oo la leeyahay 19-ka December 2011 ayaa lagu dhawaaqi doonaa xuduud badeedka Soomaaliya ee loo yaqaan "EEZ" (Exculisive Economic Zone) ama "Aagga Dhaqaalaha ee Gaarka ah".
Waxaad halkan hoose ka akhrisan kartaan sababta rasmiga ah oo aay u aruursanayaan saxiixyada Dowladda KMG iyo Dowlad goboleedyada in aay tahay qorshe horay u yaallay oo hadda la dhameestirayo.
Fadlan akhriya warbixintaan.
Waxaa aad u cajaa'ib badan in xukuumadda KMG ay dad ajnabi ah kala doodeen "War nimanyahow yaan la idin khiyaamayn oo la idinka dhicin dalkiina." Arrintaas waa mid aad looga xumaado in wasiirkii kalluumaysiga oo arrinta lagala talinayo uusan dheg u dhigayn ama iska indha saabayo.
Arrinta shirka Garoowe waxaa muhiim ah in MASUULIYIINTA ka socda Dowlad Goboleedyadu ay ku mintidaan sidii qodobka Badda Loo Difaaci lahaa oo ay ku adkaystaan in aan loo baahnayn in xeer cusub lagu dhawaaqo ee la yiraahdo "WAA LAHAYN XEER BADEED" - Waa Law No. 37 oo jirey laga soo bilaabo 1972, taas in laga dhaadhiciyo kuwa dabada ka riixaya qorshaha gurracan ee loogu magac daray ROADMAP. Anigoo aaminsan in xubnaha ka qeebgalaya Shirka GAROWE ay fahamsanyihiin khayaanada meesha ku jirta, ayaa waxaan ka codsanayaa in lagu adkeesto in "Soomaaliya AY LAHAYD XEER BADEED oo 200nm TERRITORIAL WATERS." Khayaanada meesha ku jirtana ay miiska u saaraan.
Waxaan Xubnaha Dowlad Goboleedyada ka socda oo shirka GAROWE ka qeebgali doona ku adkeeynayaa in aan la khayaanin oo dokumenti dambe aaysan saxiixin (WAA MUHIIM) yaan saxiix la idinka helin. HADDII aad dukumiinti saxiixaysaan ha noqdo mid dhigaya in "laga soo bilaabo 1972 ay Soomaaliya lahayd xuduud badeed oo ah 200 mayl-badeed (200nm), islamarkaasna laga soo bilaabo 2009 in Soomaaliya leedahay xuduud badeed oo gaareysa 350 mayl-badeed."
MUDAHARAADKA EMAIL KU JAWAABID AH OO LOOGA SOO HORJEEDO BOOBKA BADDA SOOMAALIYEED.
Admiral Faarax Qare "Xuduuda Badda Soomaaliyeed ma ahan 12nm ee waa 200nm"
Waxaan shacabka Soomaaliyeed farayaa ama ka codsanayaa in ay emailyo iyo telefoono iyo su'aalo la xiriira badda Soomaaliya u diraan DFKMG, madaxdooda oo dhan sida xafiiska madaxweynaha, xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka, xafiiska ra'iisul wasaaraha, oo laga codsado qof kasta oo Soomaali ah in uu u diro ugu yaraan hal email oo uu arrinta kaga soo horjeedo ama hal telefoon.
Wadaniyiinta Soomaaliyeed ha isgaarsiiyeen dhexdooda E'mailyada iyo teleefoonnada an kor kusoo sheegay si uu u hirgalo MUDAHARAADKA EMAIL KU JAWAABID AH OO LOOGA SOO HORJEEDO BOOBKA BADDA SOOMAALIYEED.
Qaabka emailka ama telefoonka loo dirayo:
Ugu horayn waa in ay noqdaan email aysan ku jirin wax yooyootan ah ama aflagaado shakhsi ah,
Cinwaanka Emailku ha noqdo mid lagu muujinayo sida looga soo horjeedo boobka badda Soomaaliyeed
in Madaxda DFKMG la xusuusiyo xeerkii badda Soomaaliyeed u degganaa ilaa 1972 (LAW NO. 37), iyo in ilaa 1972 ay xuduudda badda Soomaaliyeed ahayd 200 maly badeed oo u dhiganta 370 kiiloomitir, islamarkaasna laga soo bilaabo 2009 ay xudduuda badda Soomaaliya noqoneyso 350nm (648 km). Arrinta muhiimka ahna ay tahay in cabbirka 200nm uu ahaa TERRITORIAL WATERS ee uusan ahayn EEZ. Sidaas daraadeedna ay caddeeyaan sababta ku kallifasa in ay aqbalaan 12 mayl.
Ha noqoto email ama dhambaal kooban oo si xigmadaysan loo qoray.
Taladii ugu dambeysay waxay tahay in ROADMAP laga horyimaado oo aan la oggolaanin maadaama lagu duudsiinayo badda Soomaaliyeed iyo in aan yeelanno BAR KULAN aan ku badbaadinno Baddayada iyo khayraadkayaga (Akhri Xubin ka noqo Xaruntan Cusub)
Qoraaga (Bashiir Shiikh Maxamed), waa diblomaasi Soomaaliyeed oo ka soo shaqeeyay safaaraddii Soomaalida ee Stockholm xiligii uu safiirka ka ahaa halgamaagii weynaa ee ee Cabdulaahi Ciise Maxamuud (Alle ha u naxariistee). Sannadkii 1979-kiina waxa uu noqday sii hayaha (Charge D'affaires) ee safaaradihii Soomaaliya uga furnaa waddamada Skandaneviyanka